6 ပွင့်ချပ်အစားအစာ | တရားဝင် site Keto Guru
ဆွဲဆောင်မှုရှိသောပုံစံများကိုလိုက်စားရာတွင်လူတို့သည်အစားအစာဖြစ်သောအခက်အခဲများစွာကိုခံရပ်ရန်တလိုတလားရှိကြသည်။အခုသူတို့ထဲကတော်တော်များများရှိနေပါပြီ - သင်ကြိုက်နှစ်သက်ရာတစ်ခုကိုရွေးချယ်ပြီးသင့်တောင်းဆိုမှုအားလုံးနှင့်ကိုက်ညီဖို့လိုပါတယ်။သူတို့ထဲကတစ်ခုမှာ6ပွင့်ချပ်အစားအစာဖြစ်သည်။
နည်းလမ်းကိုရေးသားသူသည်အစာအာဟာရကို အခြေခံ၍ အစားအစာကိုအခြေခံသည့်အန်နာဂျူဟန်ဆင်ဖြစ်သည်။ထို့ကြောင့်ဆရာ ၀ န်သည်ရက်သတ္တပတ်၏တစ်ရက်ကျသောခြောက်ရက်ကြာအစီအစဉ်ကိုတီထွင်ခဲ့သည်။ကာဗိုဟိုက်ဒရိတ်နှင့်ပရိုတိန်းရက်များအစားထိုးမှုကြောင့်ခန္ဓာကိုယ်ကိုပြင်းထန်သောစိတ်ဖိစီးမှုသို့မကျရောက်စေခြင်းကြောင့်အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုရရှိသည်။ဆိုလိုသည်မှာလူတစ် ဦး သည်တစ်နေ့လျှင်ခွင့်ပြုထားသောထုတ်ကုန်တစ်ခုတည်းကိုသာလျှော့ချသည်။အန်နာဂျိုဟန်ဆင်ကိုယ်တိုင်နေ့တိုင်းအစားအသောက်အတွက်မီနူး၏ပွင့်ချပ် (၆) ခုကိုတီထွင်ခဲ့သည်။ဤပုံစံသည်
ကြာသပတေးနေ့ - သီးနှံ (ဂျုံယာဂု) ။
သောကြာနေ့တွင် - အိမ်တွင်းဒိန်ခဲ။
စနေနေ့ - အသီး။
သင်ခွင့်ပြုထားသောထုတ်ကုန်ပမာဏ၏အကန့်အသတ်မရှိသောအစာကိုမစားနိုင်ကြောင်းကိုလည်းထည့်သွင်းစဉ်းစားသင့်သည်။ထို့ကြောင့်ငါးကိုတစ်ရက်လျှင်ဂရမ် ၅၀၀ ဂရမ်၊ ဟင်းသီးဟင်းရွက်များ - ၁. ၅ ကီလိုဂရမ်၊ အသား - ၅၀၀ ဂရမ်၊ သီးနှံ - ၂၀၀ ဂရမ်၊ အိမ်တွင်းဒိန်ခဲ - ၅၀၀ ဂရမ်၊ သစ်သီးများ - ၁. ၅ ကီလိုဂရမ်စားနိုင်သည်။ထိုကဲ့သို့သောအစားအစာတွင်သင်တစ်နေ့လျှင် ၆၀၀-၈၀၀ ဂရမ်ဆုံးရှုံးနိုင်သည်။ ၎င်းသည်အမြန်ရလဒ်ဖြစ်သည်။
အာဟာရဓာတ်ပေါင်း ၆ မျိုးပါသောအာဟာရသည် ၆ ရက်ကျော်မျှစားသုံးသည့်အမျိုးမျိုးသောအစားအစာများဖြစ်သောကြောင့်အာဟာရအများဆုံးသုံးစွဲမှုတစ်ခုဖြစ်သည်ဟုအာဟာရပညာရှင်များကပြောကြားသည်။
ခုနစ်ပွင့်၏အဓိကအကျိုးကျေးဇူးများ (၆) Petal Diet:
ဟုတ်ပါတယ်၊ အခြားမည်သည့်အစားအစာများနည်းတူ pluses များအပြင် contraindication များလည်းရှိသည်။ သို့သော်နောက်ပိုင်းတွင်၎င်းတို့ထံကျွန်ုပ်တို့ပြန်လှည့်လာလိမ့်မည်။ဤဆောင်းပါးတွင်လည်းသင်ကြိုက်နှစ်သက်ရာနှင့်လိုက်လျောညီထွေဖြစ်စေနိုင်သော ၆ ပွင့်လွှာအစားအစာအတွက်နမူနာချက်ပြုတ်နည်းများကိုသင်တွေ့လိမ့်မည်။
အနုတ် ၅ ကီလိုဂရမ်ထိရရှိသောရလဒ်များသည်အလွယ်တကူရရှိနိုင်ပြီးအခြား mono အစားအစာများကဲ့သို့ကျန်းမာရေးကိုများစွာထိခိုက်စေခြင်းမရှိပါ။
ဒီနေ့မှာလူ့ခန္ဓာကိုယ်ဟာပရိုတင်းနဲ့ polyunsaturated Omega-3 အက်ဆစ်တွေရတယ်၊ ဒါက Dieter အတွက်လိုအပ်တယ်။ဤအဆီများသည်တိရိစ္ဆာန်များနှင့်မတူဘဲအစာကြေလွယ်ရန်လွယ်ကူပြီးအဆီအလွှာတစ်ခုမဖြစ်ပေါ်စေသော်လည်းအထူးအကျိုးကျေးဇူးများရရှိစေသည်။ဤအချိန်ကာလသည်ခန္ဓာကိုယ်ကိုပိုမိုတင်းကြပ်သောဟင်းသီးဟင်းရွက်နေ့သို့ကူးပြောင်းရန်ပြင်ဆင်ပေးသည်။
ဒီနေ့ကိုယ်အလေးချိန်ကျအောင်လုပ်တယ်။အမှန်မှာဟင်းသီးဟင်းရွက်ကာလအတွင်းခန္ဓာကိုယ်သည်အနည်းငယ်သောကယ်လိုရီများနှင့်အတူဗီတာမင်များနှင့်ကျန်းမာသောအမျှင်ဓာတ်များစွာရရှိသည်။၎င်းသည်သင်၏အူလမ်းကြောင်းအူလမ်းကြောင်း (GI) ၏လည်ပတ်မှုကိုတိုးတက်စေလိမ့်မည်။ခန္ဓာကိုယ်၏အကျိုးကျေးဇူးများကိုသာရရှိရန်နှင့်ကယ်လိုရီလိုအပ်မှုကြောင့်အဆီဆဲလ်များကိုသိုလှောင်နိုင်စွမ်းမရှိစေရန်အတွက်ကုန်ကြမ်းသိုမဟုတ်ဟင်းသီးဟင်းရွက်များကိုသာ ဦး စားပေးခြင်းက ပို၍ ကောင်းသည်။
သမားရိုးကျတစ်ခုတည်းသောအစားအစာအစားအစာများနှင့်မတူဘဲ၊ ၆ ပွင့်လွှာအစားအစာများကိုတစ်နေ့လျှင်ပါဝင်ပစ္စည်းတစ်မျိုးတည်းသာပါသောနေ့များအဖြစ်ခွဲထားသည်။
သုံးရက်မြောက်သောနေ့တွင်သင်ကကိုယ်အလေးချိန်ကျခြင်းအတွက်အသက်ကယ်သမားဟုခေါ်ဆိုနိုင်သောကြက်သားရင်သားကိုသင်ဝယ်နိုင်သည်။အမှန်မှာ၎င်းသည်အသားဖြူ (အဓိကဖြစ်သည်။ အစားအစာတွင်အရေပြားကိုမလိုအပ်သောအဆီစုဆောင်းထားခြင်းမှဖယ်ထုတ်ပစ်ရန်ဖြစ်သည်) သည်ပရိုတင်းပမာဏများစွာပါ ၀ င်ပြီး၎င်းသည်လူ့ခန္ဓာကိုယ်အတွင်း၌အပြည့်အဝစုပ်ယူပြီး၎င်းကိုပြည့်နှက်စေသည်။ကြက်သားရည်သည်ဗီတာမင်များပါ ၀ င်သည်။ သံ၊ ဖော့စဖရပ်၊ မဂ္ဂနီဆီယမ်၊ ပိုတက်စီယမ်။
ပရိုတင်းဓာတ်သည်အစားအစာ၏ ၆ ရက်တာကာလအတွင်းနာကျင်မှုအရှိဆုံးဖြစ်သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်ယခုအချိန်တွင်လူတစ် ဦး သည်စွမ်းအင်နှင့်ဆာလောင်မွတ်သိပ်မှုမရှိသောကြောင့်ဖြစ်သည်။နှင့်နံနက်ယံ၌ထိုကဲ့သို့သောကြာမြင့်စွာစောင့်ဆိုင်းခဲ့ရသောအနုတ်အကြေးခွံပေါ်မြင်နိုင်ပါလိမ့်မည်။ယခုအချိန်တွင်အရည်အဖြစ်အနေဖြင့်လက်ဖက်ရည်ကြမ်းကိုသကြား၊ ရေနှင့်ကြက်သားမပါဘဲသုံးနိုင်သည်။
ကောက်ပဲသီးနှံ Mono အစားအသောက်
သီးနှံများနေ့တွင်ရေတွင်ချက်ပြုတ်ထားသောကျန်းမာသောသီးနှံများကိုစားခွင့်ပြုသည်။ထို့ကြောင့်ထပ်တိုးသကြားသို့မဟုတ်ဆားမလိုအပ်ပါ။ဒီနေ့မှာတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအရေးမကြီးတဲ့လုပ်ရပ်ဖြစ်အောင်လုပ်နိုင်တယ် - ဖွဲနုသို့မဟုတ်ကောက်ပဲသီးနှံပေါင်မုန့်ကိုစားပါ။အစေ့များသည်အစာခြေခြင်းအတွက်ခန္ဓာကိုယ်မှစွမ်းအင်အကြီးအကျယ်လိုအပ်သည်။ဤအဆင့်တွင်သင်အနည်းဆုံးအပူဖြင့်ကုသမှုကြောင့်ကိုယ်အလေးချိန်ကျစေနိုင်သည်။မဟုတ်ပါ၊ စင်ကြယ်သောဂျုံယာဂုကိုစားရန်မလိုပါ၊ သို့သော်ညတွင်မီးဖိုချောင်သုံးခြင်းနှင့်အစားထိုးခြင်းကိုအတော်လေးဖြစ်နိုင်သည်။အဓိကကတော့သင်တစ်နေ့လျှင် 200 ဂရမ်ခြောက်သွေ့သောဂရိတ်များမစားနိုင်ကြောင်းသတိရရန်ဖြစ်သည်။
၆ ယောက်ပါသောအစားအစာသည်ပုံမှန်အားဖြင့် mono-diets များကဲ့သို့ခန္ဓာကိုယ်ကိုမထိခိုက်စေပါ၊ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်ခန္ဓာကိုယ်သည်တစ်နေ့သာလိုအပ်သောအရာဝတ္ထုများကင်းမဲ့နေပြီးနောက်တစ်နေ့မနက်တွင်သူမလိုအပ်သည့်အရာများကိုရရှိစေသည်။
အပတ်စဉ်ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းအစားအစာငါးရက်မြောက်နေ့တွင်အိမ်တွင်းဒိန်ခဲကိုစားပါ။ဤပစ္စည်းသည်ကြက်သားရင်သားနှင့်အတူ၊ ကိုယ်အလေးချိန်ကျရန်အတွက်အသုံးဝင်သောပရိုတင်းဓာတ်သိုလှောင်ခန်းဖြစ်သည်။အခွံခွာသောနေ့တွင်သင်ခန္ဓာကိုယ်ကိုဗီတာမင်များနှင့်ဓာတ်သတ္တုများနှင့်ပြည့်စုံစွာဖြည့်နိုင်သည်။ဒီနေ့မှာကိုယ်အလေးချိန်ကျသူတွေရဲ့ကုန်စုံတောင်းမှာ -
အဆီနည်းသည့်ဒိန်ခဲ (mozzarella, feta);
သစ်သီးများ Mono အစားအသောက်
အစားအစာ ၆ ရက်မြောက်နေ့တွင်သင်သည်သစ်သီးများနှင့်သစ်သီးများကိုသာစားရမည်။ဒီနေ့ဟာအရသာရှိတဲ့အစားအစာကြောင့်ခံနိုင်ရည်အလွယ်ကူဆုံးပဲ။ယခုအချိန်တွင်ပင်ပန်းနေသောကိုယ်ခန္ဓာကိုလိုအပ်သော polysaccharides, vitamins များဖြင့်အားဖြည့်ပေးနိုင်ပြီးရှုပ်ထွေးသောဘိုဟိုက်ဒရိတ်ဖြင့်ပြည့်နှက်နိုင်သည်။ အူသိမ်ကိုပုံမှန်ဖြစ်စေနိုင်သည်။
၆ ပွင့်ချပ်သောအစားအစာကိုပိုမိုပေါ့ပါးသည့်မော်နိုအစားအစာအဖြစ်သတ်မှတ်သော်လည်း၎င်းသည်ခန္ဓာကိုယ်အတွက်နေ့စဉ်စိတ်ဖိစီးမှုဖြစ်စေသည်၊ ၎င်းသည်အာဟာရဓာတ်များကိုနေ့စဉ်နေ့တိုင်းလိုအပ်နေသည်။
ထို့အပြင်သင်လောင်ကျွမ်းသောအသီးများ၏အရည်အသွေးကိုသင်အထူးဂရုပြုရန်လိုအပ်သည်။ ၎င်းတို့အားလုံးသည်လတ်ဆတ်ပြီးမှည့်နေရမည်။တစ်နေ့လျှင် ၁. ၅ ကီလိုဂရမ်စားရမည်။သီး 200 ဂရမ်ထက်ပိုမစားသုံးနိုင်နေစဉ်အသီးကိုသီး။သဖန်းပင်သို့မဟုတ်သစ်သီးခြောက်ခြောက်များကိုလည်းသင်စားနိုင်သည်။ရေချိန်ခွင်လျှာကိုပြန်လည်ရရှိရန်အတွက်သင်သည်လတ်ဆတ်သောညှစ်ထားသောဖျော်ရည်များကိုတစ်ဝက်ရေဖြင့်ရောပြီးသောက်နိုင်သည်။
အကယ်၍ သင်သည် Petal6အစားအစာကိုသင်လိုက်နာမည်ဆိုလျှင် ၆ ရက်အတွင်းသင်ကဲ့သို့သောအစားအစာများကိုစွန့်လွှတ်ရမည်။
ပေါင်မုန့်နှင့် pastries (တစ်ခုတည်းသောခြွင်းချက်မှာတလုံးလုံးပေါင်မုန့်ဖြစ်ပြီးသီးနှံနေ့၌သာ);
ketzup, mayonnaise နှင့် marinade;
သို့သော်စိတ်ပျက်အားငယ်စရာမလိုပါ၊ Petal အစားအစာခြောက်လုံးသည်ထိရောက်မှုရှိပြီးရလဒ်များမှာကြာရှည်မသွားနိုင်ပါ။
ခြောက်ပွင့်ဆိုင်အစားအစာသည်အလုပ်ခွင်၌ (သို့) ခရီးစဉ်တစ်ခုအတွက်တစ်နေ့လုံးကုန်ပစ္စည်းတစ်မျိုးတည်းကိုသာကွဲပြားသောချက်ပြုတ်နည်းအမျိုးမျိုးဖြင့်စားခွင့်ပြုထားသည့်အတွက်အလွန်အဆင်ပြေမည်မဟုတ်ပါ။
အန်နာဂျိုဟန်ဆင်သည်ငါးပွင့်ခြောက်အစားအစာအတွက်နမူနာ menu တစ်ခုကိုတီထွင်ခဲ့သည်။အပြန်အလှန်အားဖြင့်အာဟာရဗေဒပညာရှင်များသည်အခြေခံမူများနှင့်အစားအစာကိုပြန်လည်ပြင်ဆင်ပြီးနောက်နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံ၏လူနေမှုဘ ၀ နှင့်ကိုက်ညီအောင်ပြုပြင်ခဲ့သည်။ထို့ကြောင့်အင်တာနက်ပေါ်တွင်သင်၏အရသာ ဦး စားပေးမှုနှင့်အံဝင်ခွင်ကျဖြစ်သောအသေးစိတ်အစားအစာချက်ပြုတ်နည်းများများစွာရှိသည်။သွေးဆောင်မှုမည်မျှပင်ရှိပါစေအစားအစာ၏အထွေထွေအခြေခံမူများမှသွေဖည်ခြင်းမဟုတ်ပါ။
မနက်စာ - ဝက်ခြံများ၊ ဆော်လမွန်သို့မဟုတ်ရေချိုငါးများငါးများကိုပြုတ်ပါ။ ဆားအနည်းငယ်ထည့်နိုင်သည်။
နေ့လယ်စာအတွက် - တူနာ၊ ဟင်းသီးဟင်းရွက်နှင့်ဆားတို့ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောငါးဟင်းချို (ဟင်းသီးဟင်းရွက်များထပ်ထည့်ရန်တားမြစ်ထားသည်) ။
ကိုယ် ၀ န်နှင့်နို့တိုက်စဉ်ကာလအတွင်းကျောက်ကပ်၊ အစာအိမ်နှင့်အူလမ်းကြောင်းရောဂါ၊ ဆီးချိုရောဂါများအတွက်ဤအစားအစာကိုတားမြစ်ထားပါသည်။
ဤကာလအတွင်းဟင်းသီးဟင်းရွက်များကိုမည်သည့်ပုံစံဖြင့်မဆို - ကုန်ကြမ်း၊ ရေပူ၊ ပြုတ်၊ ဖုတ်နိုင်သည်။အဓိကအရာကတော့ရေနံကိုဖယ်ထုတ်ဖို့မဖြစ်နိုင်ဘူး။
နံနက်စာအတွက် - အာလူးပြုတ်၊ အာလူးကြော်သို့မဟုတ်ဟင်းသီးဟင်းရွက်တစ်ခုလုံးစားပြီးလျှင်၊ ဂေါ်ဖီထုပ်နှင့်မုန်လာဥသုပ်ထည့်ပါ။
လျစ်လျူရှုမှုကိုရှောင်ရှားရန်၊ ဘိုဟိုက်ဒရိတ်မှပရိုတင်းသို့ပြောင်းရန်လိုအပ်သည်။ဗုဒ္ဓဟူးနေ့အတွက်အသေးစိတ် menu သည်ဤပုံစံနှင့်တူသည်။
နံနက်စာ - ကြက်သားအသားပြုတ်များ။
နေ့လယ်စာအတွက် - ဇီယာစေ့နှင့် parsley ပါသောကြက်သားရည်။
နေ့လည်စာစားရန်အတွက် - အရေပြားမပါသောအသားပြုတ်စက်။
ညစာ - ဆားမပါဘဲချက်ပြုတ်ထားသောကြက်သားအသား
ဗိုက်ဆာတာမခံစားရရန်နေ့စဉ် ၆ ကြိမ်အထိအဟာရအနည်းငယ်စားရန်လိုအပ်သည်။
ဒုတိယမနက်စာ - ပြောင်းဆန်စေ့။
နေ့လည်စာ - bulgur ။
နေ့လည်စာ - ဆားထည့်ပါကဆန်။
ညစာ - buckwheat ။
သင်ဟာထောပတ်သီးတွင် ၆ ပွင့်ချပ်ကိုစားနိုင်သည်။
နံနက်စာ - ဝိုင်မပါဘဲအိမ်တွင်းဒိန်ခဲ။
ဒုတိယမနက်စာ - သဘာဝဒိန်ချဉ်။
နေ့လည်စာ - အိမ်တွင်းဒိန်ခဲနှင့် ၁၀၀ မီလီမီတာ။အဆီဓာတ်နည်းသောနို့။
နေ့လည်စာ - အိမ်တွင်းဒိန်ခဲ။
ညစာ - အိမ်တွင်းဒိန်ခဲနှင့် ၁၀၀ မီလီမီတာ။အဆီဓာတ်နည်းသောနို့။
သကြားလုံးအဖြစ်သကြားကိုအစားအစာ၊ ဆားနှင့်မွှေးနံ့သာတို့မှဖယ်ထုတ်ထားသည်။တစ်နေ့လျှင်အနည်းဆုံး ၁. ၅ လီတာအရည်သုံးရန်လိုသည်။
ခြောက်ရက်မြောက်နေ့တွင်သင်သည်သစ်သီးများ - ချိုသောအစားအစာများကိုသင်တတ်နိုင်သည်။အဓိကသော့ချက်မှာဓာတုပစ္စည်းများမပါဘဲလတ်ဆတ်သောရာသီအလိုက်သစ်သီးများနှင့်သီးများကိုရွေးချယ်ရန်ဖြစ်သည်
နံနက်စာ - ငှက်ပျောသီး ၁ ။
ဒုတိယမနက်စာ - လိမ္မော်နှင့် ၂ ကီဝီ။
နေ့လည်စာ - ပန်းသီးတစ်လုံးနှင့် apricots ၂ ။
နေ့လည်စာ - သစ်သီးဝလံများ (ဘလူးဘယ်ရီ, ဘလူးဘယ်ရီ, ဘလက်ဘယ်ရီ) ။
ညစာ - လိမ္မော်သီး၊
၇ ရက်မြောက်နေ့တွင်ပွင့်ချပ် ၆ ချပ်မှထွက်သောလမ်းတစ်ခုရှိသေးသည်။ဤအချိန်တွင်သင်ကိုယ်တိုင်ရေပေါ်တွင်အစာရှောင်သည့်နေ့ကိုစီစဉ်နိုင်သည်သို့မဟုတ်သင့်တင့်လျောက်ပတ်သောအစာအာဟာရ၏အခြေခံမူများအရစားနိုင်သည်။ရက်သတ္တပတ်အတွက်တင်ပြထားသော menu ကိုလုံးဝလိုက်နာရန်မလိုအပ်ပါ။အဓိကအရာသည်အလွန်အကျွံအစာစားခြင်းနှင့်အစားအစာ၏အခြေခံသဘောတရားများကိုလိုက်နာခြင်းဖြစ်သည်။
၆ Petal Diet သည်ရိုးရိုးရှင်းရှင်းနှင့်မှန်ကန်သောပါဝင်ပစ္စည်းများရရှိမှုအပြင်၎င်းကိုလွယ်ကူစွာသည်းခံနိုင်မှုနှင့်အမျိုးမျိုးတို့ကြောင့်ချစ်ကြသည်။သို့သော်ဤအစားအစာကိုလိုက်နာရန်သို့မဟုတ်မလိုက်ဖက်ရန် - လူတိုင်းသည်မိမိတို့ဘာသာဆုံးဖြတ်ရန်လိုသည်။ခန္ဓာကိုယ်ကိုတင်းတင်းကျပ်ကျပ်အစားအစာများဖြင့်မပြီးနိုင်သေးဘဲ၊ မှန်ကန်တဲ့အစားအစာကိုရွေးချယ်ရန်မှာသင်အပေါ်မူတည်သည်။